मलाई पुस्तक ‘नयाँ घर’ मन पर्छ किनकि यसले सिङ्गो समाज बोलेको छ Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
मलाई आख्यान, गैरआख्यान दुवै पुस्तक मन पर्छन्। तर म गैरआख्यान पुस्तक बढी पढ्ने गर्छु।
पुस्तक ‘नयाँ घर’ ले सिंगो समाजका विषयवस्तुलाई समेटेको छ। प्रेम, प्रकृति, महिला, दलित, धनी–गरिब, भोका–नांगा, राजनीति समग्र विषयलाई जोडेको यो एउटा पूर्ण पुस्तक हो।
यसै पुस्तकको माध्यमबाट २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा धेरै युवाहरू पूर्णकालीन रूपमा जोडिएका थिए। मेलै धेरै पटक दोहोर्‍याएर अध्ययन गरेको पुस्तक हो नयाँ घर।
लेखनशैली निकै सरल भएकोले यो पुस्तक नयाँ पाठकले सहजै पढ्न सक्छन्। पुस्तकले हाम्रो समाजलाई छर्लङ्ग देखाएकोले होला मलाई मज्जाले तानेको थियो।
यस उपन्यासमा सूर्य र सिलसिला दुई पात्रलाई निकै सशक्त रूपमा खडा गरिएको छ। जो आफ्नो घरपरिवार र प्रेमिकाको प्रेमलाई त्यागेर सिंगो समाज र क्रान्तिको बाटो रोजेर नयाँ घर निर्माणको लागि हिँडेका छन्। सच्चा कम्युनिष्टले प्रेम, यौन, परिवार हरेक विषयलाई कसरी हेर्छन् भन्नेबारेमा पात्रहरूले स्पष्ट देखाइदिएका छन्।
पुस्तक अध्ययन गर्ने क्रममा परिवारको जिम्मेवारी काँधमा लिएका वृद्ध हजुरबुबाले नाति सूर्यको भोक मेट्न साउने झरी अनि रातिको बेला नास्पती चोर्न गएको त्यो प्रसंगले मलाई निकै छोएको थियो।
क्रान्तिमा होमिदा सूर्य आफू अपांग बन्न पुग्यो तर आफ्नो लागि मात्र सोच्नु, निजी सम्पत्ति जोड्नुभन्दा जनताको मुक्तिको लागि लड्ने निर्णय गरेकोमा सूर्य खुसी हुन्छ। अझै यस्ता सूर्यहरू जन्मनुपर्छ। तर सूर्यलाई कम्युनिष्ट बनाउने साथीहरू, जनताको लागि लड्नेहरू जसरी पार्टीभित्रै रहेर धनी बन्ने, जनताको बलिदानमाथि रजाइँ गर्ने जुन प्रसंग छ, त्यसले वर्तमानका कम्युनिष्ट भनिनेहरूको चरित्रलाई देखाइदिएको छ।
पुस्तककी अर्की पात्र सिलसिलाद्वारा पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरू दमन र शोषणको भुमरीमा कसरी नाचिरहेका छन् र कसरी लड्नुपर्छ भन्नेबारे प्रष्ट देखाएको छ। महिलाहरू बौद्धिक र शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई सिलसिलाले तोडिदिएकी छिन्। बुबाले रक्सी पिएर आमामाथि गरेको व्यवहार र चरम गरिबीबीच हुर्किएकी सिलसिलाले गरेको विद्रोह निकै दमदार छ। आफू मात्र होइन, सबै महिलाहरू मुक्त हुनुपर्छ भन्ने चेतले भरिएको छ नयाँ घर।
पुस्तकमा उठाइएको दलितको विषय पनि निकै गम्भीर छ। एउटा दलित परिवार खुसी हुँदा, राम्रो लुगा लगाउँदा, मिठो–मसिनो खाँदा समाजका कथित उच्च जात भनिनेहरूलाई पोल्छ। दलितहरू आर्थिक रूपमा सबल भएको यो समाजले देख्न सक्दैन। जबसम्म आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा समान अवसर मिल्दैन तबसम्म दलितहरू शोषणमा परिरहन्छन्। महिला मुक्ति, राजनीतिक जीवन, सर्वहारा वर्ग, दलितका विषयलाई निकै जोडदार तरिकाले उठाइएको छ पुस्तकमा।
धेरैले भन्ने गर्छन्, राजनीति मन पर्दैन। राजनीति गर्दिनँ तर हरेक व्यक्तिसँग राजनीति जोडिएको हुन्छ। पार्टी खोलेर, नेता बनेर भाषण गर्नुलाई मात्रै राजनीति भनिँदैन। पुँजीपतिले मजदुरलाई शोषण गर्नु पनि राजनीति हो। हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा तथा हरेक विषयसँग राजनीति जोडिएको हुन्छ। यो विषयलाई पनि पुस्तकले गज्जबसँग जोडेको छ।
उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि पुस्तकमा केही कमजोरी भने छन्। कोही नभएका र केही नभएका मान्छे मात्रै कम्युनिष्ट बन्दा रहेछन् भन्ने आम पाठकलाई नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि देखिन्छ।
अर्को कमजोरी, रेनु बलात्कृत भएपछि आत्महत्या गर्छिन्। पुरुषबाट उत्पीडनमा पर्दा समाधान भनेको आत्महत्या होइन, पितृसत्ता ढलाउन विद्रोह गर्नुपर्ने हो। पितृसत्ताले बलात्कृत महिला जुठो हुन्छन्, समुदायले उपेक्षा गर्छ, त्यसैले आत्महत्या नै अन्तिम उपाय हो भनेर सिकाएको छ।
महिला जवानीमा सुन्दरी, बुढी हुँदा बोक्सी अनि मुक्तिको बाटो तीर्थस्थल गई पूजापाठ गर्दै कुटीमा बस्ने, बलात्कृत महिलाले आत्महत्या गरिरहने हो भने यो व्यवस्था विरुद्ध को लड्ने?
महिला आफू मात्रै मुक्त नभई सम्पूर्ण महिला मुक्तिका लागि एकजुट भई यो व्यवस्था विरुद्ध लड्नुपर्छ। रेनुलाई सिलसिला जत्तिकै सशक्त बनाउनु लेखकको कर्तव्य थियो।
(‘बिर्सिएका सत्य’ का लेखक घर्ती मगर नेपाली साहित्यमा अगाडि बढ्दै गरेका युवा हुन्। विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख, कविता र कथा प्रकाशित गरिरहेका उनी अहिले नयाँ पुस्तकको तयारीमा छन्। उकेराकर्मी यशु सापकोटाले उनलाई मनपर्ने पुस्तकबारे गरेको कुराकानीमा आधारित।)